ဗေဒင် Archives - Khitamyin
ခုနစ်ရက် သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ခုနစ်ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း – (၅.၁၂.၂၀၂၁ မှ ၁၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့ အထိ ခုနစ်ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (၅.၁၂.၂၀၂၁ မှ ၁၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့ အထိ ဆရာမင်းသိင်္ခရဲ့ ခုနစ်ရက်သားသမီးများအတွက် (၅.၁၂.၂၀၂၁ မှ ၁၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့ အထိ တစ်ပတ်စာကံကြမ္မာနှင့် ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် ယတြာများကို […]
ကားစီးရင် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် အမြဲ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်း
November 4, 2021 Ko Khit 0
ကျတော်ငယ်ငယ် ကားစီးရတာကြိုက်ပေမဲ့ အသက်20 လောက်မှာ ကားစီးရင် ကားမူးလာပါတယ် ။ ကားမူးတက်တဲ့ ကျတော့သောက်ကျင့်ကို ကျတော်လွန်စွာမှမုန်းပါတယ်။ ကားစီးရင်ကားမူးပျောက် ဆေးသောက်ရပါတယ် မသောက်ဘဲကားစီးမိရင် လူကမူးမော့နေတာ၊ တစ်နေ့ ကျတော်မန်းလေးသွားတော့ ကားမူးသောက်ဆေးသောက်တာ မသက်သာဘဲ ဖြစ်နေတာ မူးချက်ကတော့ လက်ကုန်ပါဘဲ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျတော့ဘေးကကျတော်ဆရာမ ဒေါ်သန့်သန့်ဝင်းက လိုက်လာတာပါ […]
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း … 23.9.2021 မှ 29.9.2021 အထိ
September 23, 2021 Ko Khit 0
တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း မိမိအပေါ်တွင် မလိုသူများနေမည်။အထက်လူကြီးများနှင့် ပတ်သက်၍ နှလုံးစိတ်ဝမ်း မငြိမ်းချမ်းဘဲဖြစ် နေမည်။ မြင့်သောနေရာ သို့မဟုတ် တွင်းအနိမ့်ထဲသို့ မတော်တဆပြုတ်ကျတတ်မှုများ ဖြစ်စေတတ်ပါ၍ အထူးသတိထားပါ။ ရာထူးတိုးခြင်း၊ နယ်မြေသစ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဩဇာအာဏာထက်မြက်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင်ပိုမိုရရှိခြင်းများ ဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏လိုလားမှုမှန်သမျှ ပြည့်စုံ စွာ […]
September 10, 2021 Ko Khit 0
သံပုရာ၂ခွက်တင်ငွေအရမ်းဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းယတြာလုပ်နည်း ၁၁ရက်နေ့အတွက်ယတြာကုသိုလ်ပြုပါတယ် မနက်ဖြန်ကနေ၂ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေကံတက်ချင်တဲ့သူတွေ လာဘ်ပွင့်ချင်သူတွေ ထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဒီယတြာကို ရှဲပြီးလုပ်ပါ မနက်ဖြန်မနက် ၆:ဝဝကနေ ၉:၀၀ အတွင်းပြုလုပ်ရန် ယတြာသံပုရာ၂ခွက်ကိုဖျော်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကပ်လှုပါ ဖယောင်းတိုင်၂တိုင်ပါ မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ပေးပါ ဆုတောင်းရမှာပါ ယနေ့မှစပြီးငွေဝင်ရပါလိုပါတယ် အရောင်းအဝယ်ကောင်းရလိုပါတယ် ထီပေါက်စေလိုတယ်ဟု အရှင် ဘုရားဟုဆုတောင်းပါ တစ်ရက်ပဲလုပ်ရမှာပါ ရှဲပြီးမှယတြာကိုလုပ်ပါနှစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ […]
သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အသက်(၆၉) နှစ်တွင် ဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာဟောစာတမ်း
ဗေဒင်ပညာရှင်တစ်ယောက်က သေချာတွက်ချက်ပြီးဟောလိုက်တဲ့ ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အသက်(၆၉)နှစ်တွင်ဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာဟောစာတမ်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ကတည်းကေနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေအားလုံးက ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ အမေစုတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် မကြာသေးခင်လောက်ကလူမှုကွန်ယက်တွင်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောစာတမ်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ ဗေဒင်ဆရာမတစ်ဦးမှ ဟောထားတဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လက်ရှိကံဇာတာကို သေချာတွက်ချက်ပြီး ဝေမျှပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်ဟာ အသက်(၇၀)ကနေ(၈၁)နှစ်အထိရာဇအရှိန်ရှိနေပါတယ် မြန်မာပြည်အတွက်အဲ့အညံ့ကနေ လွတ်သွားပါပြီဦးဝင်းမြင့်ကတောက်လျှောက်ကိုကောင်းနေတာပါအသက်(၈၀)ကျော်တဲ့အထိပါပဲလို့ သူမရဲ့ဘဘဆရာမှအသေအချာတွက်ချက်ပြီး ဟောထားကြောင်းဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလမှာ ဦးဝင်းမြင့်မတရားအဖမ်းဆီးခံနေရတာကကံကောင်းသွားခဲ့ပါတယ် အခုလိုအဖမ်းဆီးမခံခဲ့ရပါကရောဂါကြီးတစ်ခုခုစွဲကပ်နိုင်တဲ့ကံဇာတာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အတွက်ရောဂါကြီးဖြစ်မယ့်ဘေးကလွတ်ကင်းသွားတဲ့အတွက် ဘာသာရေးလုပ်ဖို့အချိန်ပိုရသွားပြီးအကုသိုလ်လည်းကင်းသွားကြောင်းဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင်ပြည်သူရွေးချယ်ထားသောမဲနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဟာအသက်(၈၀)ကျော်အထိအသက်ရှည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက် […]
September 9, 2021 Ko Khit 0
တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စများ၊ မိသားစုအလုပ်ကိစ္စများ အရှုပ်အထွေးတွေရှိရင် ဖြေရှင်းနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပစ္စည်းများ အထားမှားနေတဲ့ပစ္စည်းများမထင်မှတ်ဘဲပြန်တွေ့တတ်ပါတယ်။ အသိမ်း လွန်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်တွေ့တတ်ပါတယ်။ အကြီးအကဲမိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့်ဖခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအားနည်းနေတတ်ပါတယ်။ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေသူများသတိထားပါ။ အမှား အယွင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးအဖမ်းအစီးခံရတတ်ပါတယ်။ အများနဲ့ တွဲပြီးလုပ်ကိုင်ခြင်းက ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းတတ်ပါ တယ်။ မိမိအကြံအစည် စိတ်ကူးထက် အခြားသူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးလုပ်တာကပိုမိုအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ […]
တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . . . 2.9.2021 မှ 8.9.2021 အထိ
September 2, 2021 Ko Khit 0
တနင်္ဂနွေ စိတ်ထဲကြည်လင်နေသလိုအရာရာအဆင်ပြေမဲ့ကာလဆိုလဲမမှားပါဘူး။ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်ဝတတ်တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပါတယ်။ မိဘအကြီးအကဲတွေဆီက အထောက်အပံ့တွေရလာနိုင်သလို လုပ်ငန်းအနာဂတ် အတွက် မျှော်လင့်ချက်ကောင်းတွေရလာနိုင်တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်က ရန်များ၊လူမုန်းများ၊မနာလို သူများတဲ့ကာလပါ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရသူတွေပိုမိုသတိထားလိုက်ပါ။ချောက်ချမဲ့သူတွေ ရှိ နေတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးအကြပ်အတည်းဖြစ်နေသူများ သေချာပေါက်ထွက်ပေါက်ရလာမဲ့ကာလလဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အိမ်ထောင်ဘက် ရပ်ဝေးသွားတာ၊ခရီးသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ကတော့ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်၊တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စိတ်တိုင်းမကျတဲ့စိတ်တွေကြောင့် ရောဂါတိုးလာတတ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သ၍ […]
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း ..19.8.2021 မှ 25.8.2021 အထိ
August 19, 2021 Ko Khit 0
တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း အခွင့်အရေးနှစ်မျိုးနှစ်ခွဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မိမိစိတ်ကလုပ်ချင်နေတဲ့ကိစ္စတွေ ကိုတော့ အထူးဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ပါ။ ခရီးကိစ္စများလဲအထူးတိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အထူးတိုး တတ်ပါလိမ့်မယ်။သူတစ်ပါးတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့တွေအများကြီးရလာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှု တွေကိုဦးစားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်အတွင်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်လဲ ဒီကာလမှာဆောင်ရွက်လို့ သင့်ပါတယ်။ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများလဲဝယ်ယူလို့အထူးသင့်ပါတယ်။ သားသမီးကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးအဝင်များပါတယ်။ ငွေရှာလို့ အထူးကောင်းပါတယ်။ ငွေစုခြင်းများ အထူးကောင်းပါ တယ်။ တတ်သိထားသော စီးပွားရေးများကို အကောင်အထည်မဖော်ရသေးရင်အကောင်အထည် […]
(၁)ပတ်စာ ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ ယတြာပြုရန်
August 16, 2021 Ko Khit 0
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၁ သြဂုတ်လ (၁၆)ရက်မှ ၊ (၂၃)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. […]